Penthouse Series Character သစ်ကြောင့် တောင်းပန်စကားဆိုခဲ့ရတဲ့ Park Eun Seak - Chelmo News Portal
Chelmo News Portal
၅မိနစ်အတွင်း တရားဝင်ကွာရှင်းခဲ့တဲ့ ဆောင်းဂျွန်ကီနဲ့ ဆောင်းဟေကို
Home›Hot›Penthouse Series Character သစ်ကြောင့် တောင်းပန်စကားဆိုခဲ့ရတဲ့ Park Eun Seak
Penthouse Series Character သစ်ကြောင့် တောင်းပန်စကားဆိုခဲ့ရတဲ့ Park Eun Seak
By Kyaw Hein
နာမည်ကြီး K Drama Series တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Penthouse ရဲ့ Season3နောက်ဆုံး episodeမှာတော့ Park Eun Seok ဟာ African American Vernacular English Accent နဲ့စကား ပြောတဲ့ လူမျိုးအဖြစ် နဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဒီ ဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့ ပရိသတ်များမြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့ ဝေဖန်မှုတွေကို အများအပြား ရရှိခဲ့ရပါတယ်။ မူလ ဇာတ်ကောင် Logan Lee ရဲ့ အမွှာ Alex အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မဲ့ ဇာတ်ကောင်ဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရှိရပါတယ်။
အဲ့ဒီ့ Character အသစ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန်နေကြသူများရဲ့ စကားသံတွေကတော့ …
“Park Eun Seak က ထုတ်လုပ်သူအသင်းနဲ့ ပြန်လည် တိုင်ပင် ထောက်ပြသင့်ကြောင်း ဒါဟာ လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှုနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို အသုံးပြုပြီး မှားယွင်းစွာ ပုံဖော်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း” ပြောဆိုကြပြီး အဆိုးဆုံးကတော့ American – Afreican လူမျိုးစု အချို့က
“ဒါဟာ ငါတို့ဆံပင်ပုံစံ ငါတို့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ငါတို့ရဲ့ဘန်းစကားတွေကို အသုံးပြုပြီး ငါတို့ကို ကိုယ်စားပြုထားတာပဲ ငါတို့လူမျိုးစုကိုငါတို့ကာကွယ်သင့်တယ် Boycott Penthouse” ဆိုပြီး ဝေဖန်ပြစ်တင်တဲ့ စကားအချို့ကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Park Eun Seak က
“ သူ့အနေနဲ့ အမေရိကန် အာဖရိကန်လူမျိုးစုအပေါ် ရန်ပြု ပြီး ရှုတ်ချတာမျိုးမဟုတ်ကြောင်း ၊ မလေးမစားဆက်ဆံတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် မျိုးမဟုတ်ကြောင်း အသိပေးလိုပါတယ် ၊ ဇာတ်ကောင် ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ အရာတွေကို အသုံးပြုပြီး မှားယွင်းတဲ့ ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ကြောင်းကို ထောက်ပြပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အမေရိကန် အာဖရိကန်လူမျိုးစုများကို လည်းတောင်းပန်ကြောင်း” ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ တရားသူကြီး ဇာတ်ကောင်အဖြစ် တွေ့မြင်ရတော့မဲ့ Ji Sung
ကြည်ရှူအားပေးမှုအများဆုံး Bossam:Steal the fate ဇာတ်လမ်းတွဲ
2021 ရဲ့ Spotify ထိပ်တန်းကို ရောက်ခဲ့တဲ့ Kpop Songs
Waist chain ဖက်ရှင်နဲ့ အမိုက်စား ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ Blackpink’s Jennie ပုံရိပ်များ
Kim Go Eun ရဲ့လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်း(၇)ခု
မြန်မာပြည်က Kpopလေးတွေ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ SM Entertainment က ပေးလိုက်တဲ့ အခွင့်အရေး
By Su Myat Noe
Druk International Film Festival မှာ ထူးချွန်ဆု (၄) ဆု ရရှိခဲ့တဲ့ ” နို့ဘီလူး” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား
နိုင်ငံပေါင်းစုံက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ပွဲတော်များအကြောင်း
“Strawberry Moon” MV နဲ့ Soompi’s Kpop Music Chart 2021 မှာနိုဝင်ဘာလအတွက် No 1 နေရာကို ရရှိခဲ့တဲ့ IU
အကျင့်စရိုက်မတူတဲ့ ကာရိုက်တာနှစ်ခုနဲ့ တွဲဖက်ကြည့်ရှူရမဲ့ Lee Dong Wook နဲ့ Wi Ha Joon
Now We are Breaking Up ဒရာမာဇာတ်လမ်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဖက်ရှင်လောကပိုင်းကာရိုက်တာသရုပ်ဆောင်ရမှုပေါ်ပြောလာတဲ့ Song Hye Kyo
Korea လိုပြောဆိုရာမှာအခက်ခဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ Rose’ ရဲ့ အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေသိအောင်ပြောပြခဲ့တဲ့ Girl’s Day’s Hyeri
Chelmo ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေး ကဏ္ဍတစ်ခု အနေဖြင့် Chelmo သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။
Chelmo မှ စာဖတ်သူပရိသတ်များအတွက် တန်ဖိုးလည်းရှိပြီး အကျိုးရှိစေမည့် သတင်းမှစ၍ အထောက်အကူပြု ဆောင်းပါးများ၊ ပျော်စရာသတင်းလေးများကို နေ့စဉ်မပြတ် တင်ပြလျက်ရှိပါသည်။
ချစ်သူနဲ့ အမြဲစကားများရန်ဖြစ်နေပေမဲ့ အချစ်မပြယ်စေဖို့
အိပ်နေတဲ့အချိန် ဟောက်တာကို သက်သာစေမယ့်နည်းလမ်းများ
Celebrity တွေရဲ့အမိုက်စား ဝိတ်ချနည်းများ
No.40, Room No.(010) No (1) Industrial Road, Opposite to Central Bank, Bahan Township, Yangon, Myanmar
Copyright © 2019 Chelmo.tips. All rights reserved.